विवाहित मानिसलाई कसरी प्रेम गर्न रोक्न?
धेरै बचपनबाट, हामी सेतो घोडामा एक राजकुमारको सपना देख्छौं। उहाँ सबैभन्दा सुन्दर, विश्वसनीय, दयालु, सज्जन, वफादार, वफादार हुनुहुन्छ ... तर त्यो सबै सुनको चमकदार छैन। जीवन अप्रत्याशित छ र अक्सर अप्रत्याशित र सधैं सुन्दर आश्चर्यजनक प्रस्तुत गर्दछ। यो निराश हुन्छ जब हाम्रो प्रेमको वस्तु पहिले नै घन्टी भएको छ, त्यो एक पत्नी हो, शायद पनि बच्चा ... ... हामी यो असंभव छ भनेर बुझ्न, यो राम्रो छैन, तर तपाईं आफ्नो हृदयको क्रम गर्न सक्दैन। र यहाँ कसरी गर्ने? विवाहित मानिसलाई कसरी प्रेम गर्न रोक्न जब आफ्नो परिवारलाई नाश गर्न पूर्णतया कुनै इरादा छैन?
एक हृदय, एक प्यारा हृदय ... संसारमा धेरै नै अकेला र योग्य पुरुष छन्, तर होइन, यसलाई कसैले कसैलाई रोज्नुपर्छ, विवाहित ... र यो लाग्छ कि उहाँ सबैभन्दा बढी हो, र यो अझ राम्रो छैन भेट्न ... तपाईं रोए, उदास, न त जसलाई उनीहरूले अरूलाई भेट्न चाहँदैनन्, उहाँ एक्लै आफ्ना सबै विचार र भावनाको स्वामित्व लिनुभयो ... अनि सबैको वरिपरि, उनीहरूलाई उनको टाउकोबाट फेंकने सल्लाह दिएका छन् ... तर कसरी आफ्नो प्रेमको गहराईमा मायालु र एक व्यक्तिलाई बिर्सन भने अझै पनि तपाईं एक साथ आशा छ कि आशा छ, र तपाईं उहाँको लागि एक हुनुहुनेछ। निस्सन्देह, तपाईंलाई थाहा छ कि धेरै कम संभावनाहरू छन्, वा लगभग कुनै पनि होइन, तर प्रिय प्रतिज्ञाहरू त्यो तलाक हुनेछ, तर केवल जब पत्नी राम्रो छ, बच्चाहरू बढ्ने, आदि। र समय मा जान्छ र केहि परिवर्तन गर्दैन। केही बिन्दुमा तपाईंले भविष्यको बिना यस्तो सम्बन्धको अन्त्यमा आइसकेको छ, किनकि केहि पनि परिवर्तन हुनेछैन।
"म मायालु हुन चाहन्छु"
सम्बन्ध तोड्न पहिलो चरण लिनको लागि यो सबै मुट्ठीमा एक मुट्ठीमा पाउने महत्त्वपूर्ण छ र परिस्थितिलाई ध्यान दिईरहेको छ। अचानक कल्पना गर्नुहोस्, तपाईंको लागि सबैभन्दा सफल परिदृश्यको साथ, तिनी अझै पनि तलाक हुन्छन् र केवल तपाईंसंग सम्बन्धित हुनेछ। तर के तपाईं उसलाई भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ? आखिर, तपाईं तिनको कानुनी पत्नी हो, एउटी केटी जस्तै हो, त्यो केटी जसलाई तिनले तिम्रो साथ धोखा दिए। के तपाईं फेरि दोश्रो भाग्यको विचारमा भेट्नुहुनेछैन? सबै पछि, यदि एक व्यक्ति एक पटक परिवर्तन भएको छ, के उसलाई दोस्रो पटक परिवर्तन गर्न रोक्छ? सायद अब तपाईंका भावनाहरू यति बलियो छन् किनकी यो तपाईंको होइन र शायद तपाईं त्यस्ता "खुशी" को आवश्यकता छैन?
राय सबै पुरुषहरू बहुभाषी हुन् र श्रीमान् छन्, उनी अझै पनि परिवर्तन हुनेछन् र कहिलेकाहीँ उनीहरूको परिवारलाई गलत तरिकाले छोड्दैनन्। यो हुन्छ कि एक मानिस साँच्चै प्रेममा पर्दछ, किनकि तिनीहरू भन्छन्, वास्तविक र पुरानो परिवार छोडेर। तर लगभग निश्चित रूपले पहिलेको सम्बन्ध पूर्णतया कटौती गर्न सकिँदैन, खासकर यदि विवाहमा बच्चाहरु र प्रायः सम्भावना हुन्छ, उनी समय-समयमा आफ्नो पूर्व-पत्नीसँग कुराकानी गर्नेछन्। के तपाईं त्यस्तो सम्बन्धमा सहज हुन सक्नुहुन्छ, के तपाईं तिनीहरूलाई खुशी दिन सक्नुहुन्छ? प्रायः सम्भव छैन। यस अवस्थामा, प्रेम बाहिर आउनु आवश्यक छ, भित्तासँग जोड्नु सम्भव छ भने पनि। अरूको दुर्भाग्य सुखी परिवारको लागि उत्तम आधार होइन।
तर यो पनि सम्भव छ कि तपाईंको अस्तित्वको प्रेमको पछि लाग्दा तपाईंको अस्तित्व पूर्णतया उसलाई उपयुक्त हुनेछ। सोच्नुहोस्, तिनीहरू आफै हुन्, के यसको लागि यो खराब छ? त्यहाँ2महिलाहरू छन् जसमा उहाँ साँच्चै चाहिन्छ, तर त्यो तथ्यले मात्र एक्कासी धोका दिन्छ, र अर्कोले यसबाट ग्रस्त हुन्छ - मेरो लागि, मलाई जीवनको सानो चीजहरू विश्वास गर्नुहोस्। तर दुखाइ कुरा यो हो कि तपाईं हेर्नको लागि समय छैन, जवान कसरी पार हुनेछ, सुन्दरता उत्तीर्ण हुनेछ र प्रायः तपाईंलाई यो आवश्यकता पर्दैन, किनकी, "ईगल" ले उसलाई कुनै युवा खोज्नबाट रोक्न सक्छ? अनि तपाईं आफ्नो बाँकी जीवनको लागि एक्लै रहनुहुनेछ ... उत्तम संभावना छैन, ठीक छ?
दुखी रिश्तेहरुलाई छुटकारा पाउन यो महत्वपूर्ण छ। कुनै आश्चर्य छैन कि उनीहरूले अरू कसैको आनन्दमा खुशीको निर्माण गर्न सक्दैनन्। र सबै पछि प्रत्येक केटीले यो योग्य छ! त्यसोभए, एक सानो सीमानालाई पिउन, सोच्नुहोस् र विदाईका शब्दहरू सिक्नुहोस् र अन्तमा तपाईलाई सीधा भाग को बारे मा बताउनुहुन्छ। कुनै बहाना नगर्ने, आफ्ना कलहरूको जवाफ नदिनुहोस्, कहिल्यै भेट्न नपाओस्, उहाँका उपहारहरू नदिनुहोस्, उहाँलाई उहाँलाई सम्झाउनुपर्ने सबै चीजहरू फेंक गर्नुहोस् - एक पटक र सबैको लागि उनीहरूलाई जोगाउनुहोस्! अनि अब, जबसम्म सम्भव छ, अन्य पुरुषहरु संग परिचित हुनुहोस्, भले यो परिचित कुनै पनि लागी लाग्दैन, केवल विपरीत यौन सम्बन्धमा आफ्नो आकर्षणको बारेमा सजग रहनुहोस् र अन्तमा तपाईले तपाईको साँचो एक प्रेम भेट्नुहुनेछ। आफ्नै आनन्द भेट्न फर्वार्ड गर्नुहोस्!
मनोवैज्ञानिक सल्लाह - परिवारलाई कसरी सुरक्षित गर्ने?
विवाहित कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ स्नातक?
केटा कसरी बिर्सनु हुन्छ?
प्रेमी कसरी राख्ने?
एक आदर्श केटी कसरी गर्ने?
एडिले उनको कन्सर्टमा एक ब्याट फेरी
कुकुरको पिडाहरू जस्तो देखिन्छ?
अनुयायीहरू कसरी उठ्यो?
जोड्नका लागि जिलेटिनको लाभ
झिल्लीले माथेमा के गर्नु पर्छ?
चिकन भाइरसमा कति कैलोरीहरू छन्?
फरवरीमा बिरुवामा के तपाईं रोप्नुहुन्छ?
किन कालो घोडाको सपना
म कसरि क्लगिंग देखि पाइप साफ गर्न सक्छु?
प्लेटफर्ममा समर स्यान्डलहरू
कपाल रंग - वसंत-गर्मी 2014
उल्लेखित - महिलाहरु मा लक्षण र उपचार
बहुक्रोइमा क्रेनबेरीको साथ केक
हरेक दिनको लागि पोलो स्टाइलिश मोडेलहरू शर्ट गर्नुहोस्
अल्टोज डी कम्म्पना राष्ट्रीय उद्यान
घरको तंत्रिका उपचार
Avocados - उपयोगी गुणहरू
सरफानको लागि पूरा
चिकन संग कलेज को रोल
नीना रिक्सी «प्रेम मा पेरिस»